Abenzi becingo kunye nabenzi boMatshini beCable - China Abenzi beentambo zeCingo kunye nabaThengi
Phezulu Isantya seNeil sokwenza umatshini yenzelwe ngokukodwa ukuvelisa ubungakanani obahlukeneyo bezikhonkwane. Sinikezela ngeentlobo zezixhobo, ekulula ukuzisebenzisa, ezikhuselekileyo ekusebenziseni, nezithembakeleyo ukuba zibaleke. Sikwabonelela ngazo zonke iintlobo zamacandelwana kunye nabancedisi abakhethekileyo.
izixhobo lemveliso, ubugcisa bemveliso phambili, umgangatho imveliso ezinzileyo
Isantya esiphezulu somatshini wocingo oluhlabayo Isetyenziselwa ukuvelisa ucingo oluhlabayo olusetyenziswa ngokubanzi kukhuseleko lomsebenzi wokhuseleko, ukhuseleko lwesizwe, imfuyo, ucingo lokudlala, ezolimo, indlela ekhawulezileyo, njl.
Umgangatho ophezulu woLungiso lweeKhonkco zokwenza uMatshini
Phezulu Umgangatho weKhonkco loLungiso lweCandelo loKwenza uMatshini ezifanelekileyo ukwenza zonke iintlobo zombane kwalenza, eshushu iqaqanjiswa, iplastiki camera umnatha idayimani wocingo kunye neengcingo, ngokweemfuno zabathengi ungenziwa ngemfuneko ububanzi ozikhethelayo 2000mm, 3000mm, 4000mm
(Qaphela: ucingo: ubunzima kunye namandla aqine malunga ne-300-400)